Neymar oo Ronaldo u soo diray fariin uu ku taageerayo kaddib dacwadii canshuur lunsiga!!! – Gool FM
(Spain) 21 Juunyo 2017. Kaliya bishii la soo dhaafay ayuu Ronaldo Real ka cawiyay La Liga iyo Champions league.
Laakiin wax kasta waa ay is badeleen kaddib markii laacibka lagu soo oogay dacwad canshuur lunsi waxa uuna doonayaa inuu soo afjaro waayihiisa ciyaareed ee Bernabeu.
dacwada inuu lunsaday lacago canshuur ah ee lagu soo eedeeyay taa oo uu si adag u dafiray ayaa laacibka ku riixeysa inuu doono inuu isaga soo huleelo caasimada Spain.
Iyadoo ay jirtana in Ronaldo uu ka careysan yahay inuusan taageero ku filan ka helin madaxwayne Florentino Perez ayaa misane la warinayaa inuu taageero ka helayo laacibka ay garoomada ku coltamaan ee Neymar.
Warsidaha Diario Gol ee dalka Spain ayaa sheeganaya in laacibka reer Brazil uu fariin WhatsApp ugu diray Cristiano Ronaldo taa oo ku muujinayo taageeradiisa ku aadan waqtiga adag uu ku jiro 32 jirka reer Portugal.
Neymar ayaa aad u fahansan xanuunka dhibaatada uu dhex jibaaxayo Ronaldo maadaama qudhiisa marar badan la soo taagay maxkamad kaddib wax isdaba marin lagu helay heshiiskii uu uga soo tagay Santos 2013.
Ronaldo ayaa iminka madax xanuunka dacwada canshuur lunsiga isaga maa weelinaya Confederations Cup oo uu ku matalayo xulkiisa qaranka.